Iindaba-Ukuqonda ukuHanjiswa kweNdawo yokuNgena manzi eTenteni
Umenzi ngamnye unendlela yakhe yokwenza iintente zingangeni manzi, zinganyangeki nge-UV kwaye ziphefumle ngaxeshanye. Ukulinganiswa okungangeni manzi kwemathiriyeli kukwimilimitha, nokucaciswa okujongileyo xa uthelekisa iintente. Inani liphakathi kwe-800 mm kunye ne-10,000 mm.
Inani libhekisa kubude bekholamu yamanzi (ngeemilimitha). Umzekelo, i-1500 mm ithetha ukuba ilaphu liya kumelana nekholamu yamanzi eyi-1500 mm (5 ') ngaphezulu komzuzu omnye, emva koko ithontsi elinye lamanzi lingavela kwilaphu. Obu bunzima banele ukuthintela amanzi emvula ukuba angaphumi kwinkqwithela engama-75-mph. Kwimveliso yangaphandle, basebenzisa le nombolo njengesishwankathelo sokuchaza ubungakanani bepeyinti esetyenziselwa ukwenza inayiloni okanye iintente zepolyester zingangeni manzi. Abanye abantu banokubiza eli xabiso uxinzelelo lwentloko lwe-hydrostatic.
Imvumelwano ngokubanzi kukuba ukuqala kwi-800-1000mm, le nto ayinamanzi. Nangona kunjalo, kungcono ukusebenzisa ikholamu ephezulu yamanzi kuba ukutyabeka kuya kudinwa kwaye ixabiso lokumelana namanzi liya kuncipha.
Ixabiso elikhulu, ixesha elide ukukwazi ukungena kwamanzi kwizinto eziphathekayo, kunye nokuphakama kokuqina kwentente; kodwa ubunzima bezinto (yiyo loo nto intente) buya kuba phezulu kakhulu. Abahambi ngebhayisikile imigama emide bahlala bekhetha iintente ezinemilinganiselo ephezulu yokuNgena manzi eHlaziyiweyo.
I-PU (i-polyurethane) yenye yezinto ezomeleleyo nezona zinxibayo, kodwa ke abavelisi abaxeleli ukuba yeyiphi na into abayisebenzisayo, ke kuya kufuneka unxibelelane nabo ukuze ufumane. I-PU inyusa ukuxhathisa kwamanzi kunye namandla ngelixa igcina ubunzima bokukhanya. Umenzi unokwandisa kuphela inani lepeyinti kwinqanaba elithile. Ukugquma ngakumbi kuthetha ubunzima kunye neendleko ezingaphezulu. Iikhemikhali ezikombathayo zikwenze buthathaka imicu, ke ngamanye amaxesha, ukonyusa kakhulu ixabiso lekholamu yamanzi kuya kunciphisa amandla elaphu. Kungenxa yoko le nto i-10000 lelona xabiso liphezulu unokufumana.